जाम संग एक नरम, सुगन्धित बिस्कुट रोल, प्रस्तावित व्यञ्जनहरु मध्ये एक पकाइएको छ, एक कप चाय या दूध को एक उत्कृष्ट को अतिरिक्त हुनेछ। एकदम सरल स्वादको व्युत्पन्न पूर्ण सरल सिफारिसहरू अवलोकन गरेर एक सरल र किफायती सेट प्रयोग गरेर प्राप्त गरिन्छ।
सेब जामको साथ पकाउनुहोस्
सिफ्टेड गेहूं आटा - 140 जी;
अन्डा ठूलो चिकन -3टुक्राहरू;
उबले पानी -90 मिलीलीटर;
बालुवा - 160 ग्राम;
सूरजमुखी तेल परिष्कृत - 20 मिलीलीटर;
रोलका लागि बिस्कुटको तयारी अन्डाको प्रसोधनको साथ सुरु हुन्छ। तिनीहरू जरूरी हुनुपर्दछ कोठाको कोठाको वर्तमान रायको विपरीत। प्रशोधन गर्नु अघि आवश्यक हुनुभन्दा पहिले तिनीहरूलाई ठुलो पार्नुहोस्। हामी खोलबाट अण्डा जारी गर्छौं, चिनी शर्करामा राख्नुहोस्, मिश्रण र मिक्सरसँग मिश्रण प्रशोधन गर्न सुरु गर्नुहोस्, यसलाई प्रारम्भिक तल्लो गतिमा समायोजन गर्नुहोस्, र अधिकतममा कलिङ प्रक्रियामा बढि बढाउनुहोस्। हामीले अण्डाको टुक्रा, चिसो र उज्ज्वल जन प्राप्त गर्न कम्तीमा दस मिनेटको लागि अण्डालाई मार्नुभयो। त्यसोभए हामी गेहुनको आटा यसलाई तिरस्कार गर्छौं र सजिलै संग यो माथिल्लो आन्तरिक आन्दोलनको साथ हस्तक्षेप गर्दछ। आटा मारो वा यो मिक्सरसँग यो प्रक्रियामा आवश्यक पर्दैन। यो केवल आफ्नो आलोचना प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
हामी बिस्कुट को आधार सूरजमुखी तेल संग तेलित टुक्रा मा डाल दि्छ, त्यसपछि यसलाई फैलाउनुहोस् र यसलाई तातो ओवनमा राख्नुहोस्। यसको क्षमताको आधारमा, बिस्कुट राम्रोसँग बेक गर्न 185 डिग्री तापमानमा सात देखि दस मिनेटको आवश्यकता पर्दछ।
यो समयमा, उबलिएको पानीमा एक सानो जाम जोड्नुहोस् र अधिकतम संभव एकरूपतामा हलचल। हामी समाप्त बिस्कुट दोस्रो सेकेन्डमा घुमाउँछौं, तेलको, टुक्राको पाना, तालिकामा राखेर, र ध्यानपूर्वक पहिलो हटाउनुहोस्। तैयारी सिरप छिट्टै अप्रत्याशित बिस्कुट, जाम को एक तह संग बारी को माथि र बारी, गर्म, रोल जबकि।
जामको साथमा बिस्कुट रोल कसरी छिटो पकाउने?
रोलका लागि आटा एकदम फरक फरक हुन्छ। एक उपयुक्त कन्टेनर सिफटेड आटा, बेकिंग पाउडर र दाईदार चाइल्डमा मिलाउनुहोस्, र त्यसपछि सुक्खा अण्डामा घुमाउनुहोस्, स्पट्युला वा चम्मचको साथ पहिला हलचल गर्नुहोस्, र त्यसपछि मिक्सरसँग स्प्रेन्डर पंच गर्नुहोस्। प्याकिंग पानामा राखिएको तेल र प्रजनन पट्टीमा परिणामकारी आटा डाल्नुहोस् र 185 डिग्रीमा सात मिनेटको लागि पकाउनुहोस्।
समाप्त बिस्कुट अझै पनि जाम या जाम संग छिटो गर्म र छिटो देखि घुमावदार रोल।
स्ट्रिप गरिएको पिटा रोटी
जाडोहरु संग केक - विभिन्न आटा र फल भराई को सबै भन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु
Aysing - नुस्खा
दही र सेब पाइ
आत्मविश्वास कसरी प्राप्त गर्ने र जीवनको आनन्द उठाउन सिक्नु हुन्छ?
कसरी प्लास्टिकको भाँडाबाट टाढा बनाउने?
वेबको सबैभन्दा घृणाजनक फोटोहरूको 16, जुन सबैले हेर्न सक्दैनन्!
ओल्गाको नाम के हो?
फ्लाई वैक्यूम क्लीनर
शॉक: इटालियन टिभि प्रेन्टरले "पूर्व हराएको" अनुहारको पूर्व प्रेमीको आक्रमण पछि!
बच्चाहरूको लागि ACTS 100
कितना प्वाल पकाउने?
कसरी स्टाइलिश हुन सक्छ?
चरण एरोबिक्स - व्यायाम
जोड़हरु को गठबंधन
Vinaigrette मा कति कैलोरीहरू छन्?
गर्भवती महिलाहरु को लागि शास्त्रीय संगीत
विलो छाल - औषधीय गुण र विनाशकारी